တရုတ်နိုင်ငံ Tianzhou-3 ကုန်တင်အာကာသယာဉ်နှင့် အာကာသစခန်းပင်မခန်း အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လာမည့်Shenzhou-13 လူတင်အာကာသယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်သွားသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်တင်အာကာသယာဉ် Tianzhou-3သည် တနင်္လာနေ့တွင် အာကာသစခန်းနှင့် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ချိတ်ဆက်မှုသည် ကွန်ပြူတာဖြင့်တွက်ချက်စီမံခြင်းဖြစ်ရာ အချိန်(၆.၅)နာရီခန့် ကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။
Tianzhou-3တွင် လာမည့် လူတင်အာကာသယာဉ် Shenzhou-13ခရီးစဉ်အတွက် အလေးချိန် (၆)တန် နီးပါးရှိသည့် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ （Xinhua）
China’s cargo spacecraft Tianzhou-3, carrying supplies for the upcoming Shenzhou-13 crewed mission, successfully docked with the space station core module Tianhe on Monday.The rendezvous and docking was computer orchestrated. The whole process took about 6.5 hours.Tianzhou-3 carries nearly6tonnes of supplies for the upcoming Shenzhou-13 crewed mission. #GLOBALink